अरुको काँ’ध च’ढ्दै हिंड्ने, सांसदमै ना’रा’बा’जी गर्ने कस्तो सन्तान जन्माएछन् : माधवकुमार नेपाल:: Mero Desh
अरुको काँ’ध च’ढ्दै हिंड्ने, सांसदमै ना’रा’बा’जी गर्ने कस्तो सन्तान जन्माएछन् : माधवकुमार नेपाल
Published on: ४ आश्विन २०७८, सोमबार १३:५०
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद बैठक अ’वरुद्ध गरेर ना’रा’बाजी गर्ने नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई ‘कु’सन्तान ’को संज्ञा दिएका छन् ।सोमबार पेशागत महासंघ नेपालद्वारा अयोजित राष्ट्रिय समितिको विस्तारित बैठकमा बोल्दै संसद बैठक अ’व’रुद्ध पार्दै आएका
सांसदहरुलाई कु’सन्ता’नको संज्ञा दिएका हुन् । उनले भने, ‘अरुको काँधमा च’ढेर, माइक खोस्दै नाक भाँ’चि’दिन्छु भनेर कसरी उफ्रेका होलान् ! कस्ता सन्तान जन्माएछन् ! कस्ता मान्छे बनाएछन् । कस्तो कुरा सिकाएछन् । कस्तो भाषा प्रयोग गर्छन् । तपाइहरु ले सुन्नुभयो भने कसैले भन्छन् आँखा मिचेर हेर्नै मन लाग्दैन किन यस्तो भएको होला ।
राम्रो मान्छे भए पो !’संसद वि’घट’न गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (५) पढ्न अध्यक्ष नेपालले भनेका छन् । साथै, संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठन भएन भनेमात्र चुनाव हुन सक्ने पनि उनले बताए ।उनले भने, ‘सर्वाेच्च अदालको फैसला पढेको छैन ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रष्ट व्याख्या गरेको छ– प्रतिनिधिसभा विघट न गर्न पाइँदैन । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठन भएन भनेमात्र चुनाव हुन सक्दछ । प्रतिनि धिसभा विघट न हुन सक्दछ त्यसबाहेक कसैलाई प्रतिनि धिसभा विघटन गर्न पाउँदैन भनेर प्रष्ट लेखेको र व्याख्या गरेको पढेको छैन र ?’
एमालेबाट छुट्टिएर गइसकेपछि पनि आफूहरुविरुद्ध किन नाराबाजी गर्नुपर्यो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । आफूहरु एमालेबाट छुट्टिएर गइसकेपछि एमाले सांसदहरु संसदमा कराउनुको कुनै अ र्थ नरहेकोपनि उनले बताए उनले भने, ‘आज हामी सुनिरहेका छौँ चोइटिएर केही मान्छेहरु गए, हाइसञ्चो भयो । यो साँच्चै हो भने त
त्यो संसदमा नारा किन लगाउनुपर्‍यो हाइसञ्चो भएको मान्छेले ? कति छन्, ९ प्रतिशत छन्, २ प्रतिशत छन्, पिलो निचरिएर आनन्द भयो भन्ने मान्छेले दिनदिनै किन त्यहाँ कराउनुपर्ने स्थिति बनेको छ संसदमा ? बरु सभामु खलाई भन्नुपर्ने यो पिलो त्यहीँ रहोस् । हामीले नि’चोरेर राखेको पि’ लो त्यहीँ राख्नुस् भन्नुपर्ने होइन । कमसेकम त्यति राख्दिनुस् फर्केर आउँलान् भन्नुपर्ने होइन ।
ढोका बन्द भनेको, पार्टी फोड्न पाइदैन । पार्टी कसैको रहर हुन्छ फो’ड्न ?’यसैगरी प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा छिट्टै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पनि उनले बताएका छन् । नयाँ बन्ने सरकारलाई स्वागत गर्न तयार रहन पनि उनले आग्रह गरे ।उनले भने, ‘अब हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरका र बन्न गइरहेको छ । तपाईंहरु स्वागत गर्नका लागि तयार रहनुस् भन्न चाहन्छु।